IFama yamaHashe iHideaway
I-Vibe yelizwe kuphela imizuzu eli-10 ukusuka eMemphis! Yiza ngumzekelo wobomi basefama kwikhaya lethu losapho kunye nendawo yomtshato. Imithi emikhulu ye-oki, amachibi, amahashe, izinja, amadada, iinkukhu, iihagu kunye neenyosi zivuselela umoya ojikeleze le fama ye-500 ye-acre nje ye-10 imizuzu ngaphandle kweMemphis. Ifakwe ngaphakathi kwigaraji yemoto eguquliweyo, indawo yethu yokuzimela yasefama imnyama kwaye izolile ukuze iphumle kamnandi ebusuku. Yonwabela ikofu yakho kwipatio kwaye ubukele amahashe ejikeleza.
Ibekwe emva kweshedi yethu yindawo esanda kulungiswa isuka kwindawo yegaraji yemoto. Indawo ngokwayo ayinazo iifestile ngaphandle, nangona kunjalo, ukuba ukhetha ukukhanya kwelanga kusasa okanye nanini na, iindwendwe ezininzi zikhetha ukufumana ikofu kunye nesidlo sakusasa kwiveranda yegaraji yemoto ngokujonga amahashe ajikelezayo. Yiza uhambe ngokokuthanda kwakho nekhitshi eligcweleyo kunye negumbi lokuhlambela eliphangaleleyo. Ibhedi ye-Queen enomatrasi omtsha kraca kunye ne-trundle engamawele efumanekayo xa uceliwe. Sinikezela ngeDirectv, i-wi-fi, kunye namaqanda amatsha asefama.
4.94 ·Izimvo eziyi-144
4.94 · Izimvo eziyi-144
Sihlala emaphandleni, engqongwe ubukhulu becala ngamasimi. Abamelwane ngabantu abasebenza nzima nabawukhathaleleyo umhlaba nentlalo-ntle yawo. Nangona kunjalo, sikwayinxalenye yendawo enkulu yeMemphis, edibanisa kakuhle idolophu encinci yokuhlala kunye nenkcubeko yesixeko esikufutshane.
Uzakufumana imiyalelo ukuze uzijonge. Ndiqhele ukwenza umsebenzi wasefama, kodwa ndishiya iindwendwe zizenzele ezazo izixhobo ngaphandle kokuba ziyandidinga. Ndiyavuya ukunika ukhenketho lokuhamba efama kwaye ndiphendule nayiphi na imibuzo. Kuninzi okuqhubekayo efama kunye nabakhweli bethu bamahashe kunye namalungu osapho akufutshane. Abantu abaninzi baye baphawula ngendlela wonke umntu anobuhlobo ngayo, kwaye umntakwethu nomama bancokola kakhulu ngoko banokubulisa ukuba kunokwenzeka kuwe.
Uzakufumana imiyalelo ukuze uzijonge. Ndiqhele ukwenza umsebenzi wasefama, kodwa ndishiya iindwendwe zizenzele ezazo izixhobo ngaphandle kokuba ziyandidinga. Ndiyavuya ukunika ukhe…